Raharaha laza adina sandoka Misy mpampianatra manambana hitokona any Antalaha
Nanao fanambarana ireo mpampianatra ao amin'ny Lycée Horace Antalaha fa hitsahatra amin'ny asany izy ireo ary tsy hisy fandraisana fisoratana anaran’ny mpianatra manomboka anio alatsinainy manerana ny Cisco Antalaha.
Fahasahiana goavana tamin’ny bakalorea Mpisandoka ho mpiadina roa tra-tehaka
Lehilahy iray tonga hiatrika ny laza adina Matematika tao Farafangana no tratra nisolo mpiadina tokony hanala izany .
Tetikasa sekoly nomerika Sekoly 20 vatsiana tablettes, vidéoprojecteurs,…
Sekoly 20 indray no hisitraka ny tetikasa “Ecole numérique” iarahan’ny Ministeran’ny Fanabeazana amin’ny Orange solidarité amin’ity taom-pianarana 2020-2021 ity.
Ministeran’ny fampianarana ambony “Tsy misy laza adina niparitaka izany”
Minisiteran’ny fanabeazana “Tsy maintsy hofoanana ny CEPE”
Fanombohan’ny BEP Nizotra tao anatin` ny filaminana
Nanomboka omaly ary haharitra 4 andro ny fanadinam-panjakana BEP (Brevet d’Etude Professionnel)
kosa ny mpampianatra-mpikaroka ary 333 ny mpikaroka-mpampianatra. Vinan’ny minisitera ny hampiditra mpampianatra-mpikaroka vaovao 600 ao anatin’ny roa taona. Isan-taona, dia 70 000 eo ho eo ny afaka bakalorea. Tsy afaka mandray afa-tsy 20 000 anefa ireo oniversitem-panjakana miisa 6 eto Madagasikara, ka tsy maintsy makany amin’ny tsy miankina ny 50 000 ambiny. Mijanona avy hatrany amin’ny fianarana ireo izay tsy afaka manohy amin’ny amabaratonga ambony. Izay no antony hananganana oniversitem-paritra amin’ireo faritra 22, raha ny nambaran’ny minisitra Elia Béatrice Assoumacou. Ho an’ity taona 2020 ity, dia efa mandeha ny fananganana ny Oniversitem-paritra any Vakinankaratra, Itasy, Analanjirofo, Menabe.